Faah faahin:- Dagaalkii ugu cuslaa ee ka dhacay degmada Ceel-waaq iyo sida ay xaaladda haatan tahay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaalkii ugu cuslaa ee ka dhacay degmada Ceel-waaq iyo sida ay xaaladda haatan tahay
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo degmada Ceel-waaq ee gobolka Gedo ku dhexmaray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaaya kuwa Kenya ee AMISOM iyo dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalkaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar gaadmo ku qaadeen fariisimo ay ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya ee AMISOM ay ku lahaayeen duuleedka degmada Ceel-waaq ee gobolka Gedo.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku geeriyootay ilaa 4 ruux, waxaana sidoo kale ku dhaawacantay tiro intaasi ka bandan, waxaana dadka dagaalkaasi ku geeriyooday ka mid ahaa Korneel Aadan Maxamed Waceys (Aadan Koronto) oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Gedo.
Dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa ugu dambeynti u suurto-gashay in muddo saacado ah ay gebi-ahaan la wareegaan gacan ku heynta degmada Ceel-waaq ee gobolka Gedo, halkaas oo mudooyinkii dambe ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee AMISOM.
Afhayeenka ciidamada militeriga dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Gedo Korneel Warfaa Sheekh Aadan oo la hadlay idaacadda VOA-da laanteeda afka Soomaaliya ayaa sheegay in dagaalyahanadda Al-shabaab shalay ay gelinkii dambe weerar ku soo qaadeen saldhiga ciidamada, ayna la wareegeen saldhiga iyo degmada Ceel-waaq ee gobolka Gedo.
“Al-shabaab dagaalkaasi waxaa Al-shabaab lagu jebiyay labo jeer hore, waxayna markii saddexaad la wareegeen saldhiga degmada Ceel-waaq, dib u gurasho ayay ciidamadeena sameeyeen, waxaana dagaalkaasi naga soo gaaray afar dhimasho iyo hal dhaawac” Sidaas waxaa yiri afhayeenka ciidamada militeriga dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Gedo Korneel Warfaa Sheekh Aadan.
Sidoo kale, Korneel Warfaa ayaa sheegay in xilliga dagaalka lagu soo qaadayay ciidankooda aysan xilligaasi jirin feejignaan maadaama ay xilli Jimco ahayd, isagoona dhinaca kale sheegay in markii ay dagaalyahanadda Al-shabaab soo galayeen degmada Ceel-waaq ay gawaaridooda kusoo buufsadeen magaca AMISOM, taas oo Shabaabka u sahashay inay la wareegaan saldhigyadda ay degmadaasi ku lahaayeen.
“Inkastoo ay maalin Jimco ahayd islamarkaana ay ciidamadeena feejignaan ka galin dagaalkaasi ayaa hadane waxaa jirtay in nimanka Al-shabaab ay degmada Ceel-waaq soo galeen iyagoo isku ekeysiiyay ciidanka AMISOM, oo ay baabuurtii beebayaasha ahayd oo ay wateen kusoo buufsadeen magaca AMISOM, taasi ayaa u fududeeysay inay si sahlan kula wareegaan degmada” Sidaasi ayuu hadalkiisa raaciyay Korneel Warfaa.
Dhinaca kale, Saraakiisha Xarakada Al-shabaab ayaa guulo la taaban karo ka sheegtay dagaalkii ay ciidankooda ku qaadeen degmada Ceel-waaq ee gobolka Gedo, waxaana ay tilmaameen inay kula wareegeen saanad militeri, isla markaana qasaare xoogan gaarsiiyeen ciidankii ay degmadaasi ku weerareen ee ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Ugu dambeyntii, dagaalyahanada Al-shabaab ayaa lasoo sheegayaa inay gebi ahaan isaga baxeen degmada Ceel-waaq ee gobolka Gedo, waxaana saakay degan xaaladda degmadaasi, iyadoona gacan ku haynta halkaasi ay saakay dib ula wareegeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee AMISOM oo horey halkaasi gacanta ugu haayay.